Ikhaya AMERICAN STARS UDanilo da Silva Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts
I-LB inikeza indaba egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngegama "Dan". I-Danilo da Silva Ingane Yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokunganeka kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nokubukeka kwakhe okubonakalayo. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abazi okuningi ngoDilo da Silva's Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
UDanilo da Silva Ingane Yokufunda Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
Ukuqala, igama lakhe eligcwele nguDanilo Luiz da Silva. Wazalwa ngosuku luka-15th ngoJulayi 1991 kunina, uMaria José da Silva nobaba, uJosé Luiz da Silva eBicas, umasipala waseBrazil esifundazweni saseMinas Gerais.
Umndeni wakwaDanilo unomsuka wawo ovela ebantwini abamnyama baseBrazil onomlando wokubandlulula kanye nokulwa indawo emphakathini waseNingizimu Melika. AmaBrazili abamnyama abaphumelelayo afana noDanilo abaye baphuma manje bahlanganyela emishadweni ehlanganisiwe eholele emabhokisini axubekile.
UDanilo wakhulela eBicas, umasipala onabantu abangu-13,000 namahora angama-3 enyakatho yeRio de Janeiro.
I-Bicas efanekiselwa ngezansi iyindawo yokuheha abantu abaningi base-Italy kanye nezizwe ezimbalwa.
UDanilo da Silva Ingane Yokufunda Indaba Plus Untold Biography Facts -Qala Umsebenzi
UDanilo osemusha, umzamo wakhe wokuba ngumdlali webhola lezinyawo uvele ngesisusa esasithola kulo mlando Edson Arantes do Nascimento ngubani owaziwa ngokuthi UPele.
Njengoba ekhulile edolobheni lapho kungekho lutho oluphela lapho kunezinyawo ezinyaweni zomuntu, kwakungelula kuDanilo osemusha ukuba akhethe ibhola esikhundleni sokuya esikoleni. Ngokufanelekile, uDanilo wayeneminyaka engu-13 ubudala ngenkathi ethatha ibhola ngokungathí sina. Uthando lwakhe lwebhola lwambona e-2004 ebhalisa eqenjini lakhe lentsha yendawo, uTupynambás owamnikeza isiteji ukukhombisa ithalenta lakhe. Ngenkathi eqenjini, efunda ukuhweba komlingisi wakhe kanye nomnqobi womhlaba wezinkathi ezimbili Cafu okubukeka kwakhe kumfundisa ukuthi angadlala kanjani isikhundla sakhe kangcono.
Ngemuva kweminyaka emibili edlula wonke amabhola e-Tupynambás, uDanilo wazizwa isidingo sokudlala ibhola elikhuphisana kakhulu. Wakhetha ukushintshela e-América Mineiro ohlangothini lwentsha e-Belo Horizonte. UDanilo ubona ukuthi iqembu lakhe lizoba yi-springboard elizoholela ekuqedweni komsebenzi osemusha.
UDanilo da Silva Ingane Yokufunda Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
UDanilo eneminyaka eyi-18 wagcwalisa umsebenzi wakhe wobusha futhi wakhuthazwa waya e-América Mineiro. Wavusa ngaphezu kwazo zonke izigcawu eziphezulu zebhola ngemuva kokushaya imigomo ebalulekile yeqembu.
Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba i-giant giant Santos ihambele. Ukuphakama kweMariro eSantos kwafika ngesikhathi esifanele. Kwafika ngesikhathi azuza umgomo owawunqoba i-2011 Copa Libertadores (i-South American efana ne-UFA Champions League - okokuqala ngqa kusukela ku-1963). Ngaphansi kwesithombe se-super Danilo osemncane enkazimulweni yakhe yeCopa Libertadores.
Kusukela ekutholeni iCopa Libertadores eceleni Neymar (okufanekiselwa ngezansi nge-trophy), ikhono likaDanilo lokubhekana nodumo lwaba ngqo ngokulingana nendlela aphethe ngayo ibhola.
Lokhu kwakunesikhathi futhi amaqembu amaningi aseYurophu amqaphela. Njengamafasitela wokudlulisa kwe-2012 kaJanuwari, amakilabhu avela eYurophu aqala ukubiza izinsizakalo zakhe. Naphezu kwesigatshana esikhulu sokukhululwa € 50 million wabeka ekhanda lakhe, uFred Porto waya phambili ukumsayina, ekhokhela isigatshana esiphezulu nemali yokubhalisa. Yilokho okwenzeka khona amaphupho akhe aseYurophu. Okunye, (isikhathi e-Real Madrid naseMan City) njengoba besho, manje umlando.
UDanilo da Silva Ingane Yokufunda Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Ngemuva kukaDanilo ophumelelayo, kwakukhona intombi enhle kakhulu kuClarice Sales (okufanekiselwa ngezansi nomyeni wakhe) owagcina umkakhe othandekayo kamuva.
Bobabili abathandi banquma ukuba nomntwana ngaphambi komshado. Babenendodana yabo, uMiguel ngo-9th ka-Ephreli, i-2015. Ngaphansi kukaDanilo nomkakhe omuhle futhi osanda kuzalwa uMiguel ugubha isithombe sakhe sokuqala sokudubula esivela kubaba wakhe.
Ngemuva kweminyaka engu-7 yokuba ndawonye, ​​uDanilo noClarice Sales bagcina sebezwa ukuthi sekuyisikhathi sokubopha ifindo. Bashade ngosuku luka-17th lukaJune 2017 eBicas, eBrazil.
Bobabili uDanilo noClarice babenomshado omkhulu kakhulu kunosuku ababehlele ngalo. Ekuqaleni bahlela umkhosi wabo womshado kuJune 30, i-2017, kodwa banquma ukwenza kwenzeke ngosuku lwe-17 lwenyanga eyayizinsuku ezingu-13 ngaphambi kosuku lomshado langempela.
Ngezansi isithombe sabo somshado kanye nendodana yabo, uMiguel. Njengoba kuboniswe ngezansi, wonke amalungu omndeni kuhlanganise noDanilo ongeke amomotheka abheke kancanyana kunekhekhe lomshado omkhulu.
UDanilo ukholelwa ukuthi indodana yakhe uMiguel (efanekiselwe ngezansi) izohola isizukulwane sesibili sebhola leDanilo Luiz da Silva Family.
I-LifeStyle kaDanilo: Ngaphandle kokungabaza, kuyindlela yokuphila kaDanilo engasiza umuntu ukuba akhe isithombe esiphezulu sobuntu bakhe. UDanilo uye wabonwa kaningi, ejabulela isikhathi esihle kakhulu.
UDanilo da Silva Ingane Yokufunda Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
Ukuqala, uDanilo ubonakala abalandeli njengomuntu ohlala ebheka ngokubhekisisa nakwezithombe nomndeni wakhe.
Ngenxa yalokhu, uDanilo angase aphuthele njengomuntu onokuthi angaba nomthelela omubi. Nokho, ukubhoboza phansi, sikunikeza amaqiniso ngobuntu bakhe.
Ngokuqondene namandla akhe, uDanilo ubonakala njengontanga njengomuntu ogcina konke okubalulekile kuye. Lokhu kubonakala endleleni abambelela ngayo emndenini wakhe njengoba kuboniswa ezithombeni zakhe zobudlelwane bomshado.
U-Danilo uyicabange kakhulu (ekuphumeni nasendleleni), oqotho (ikakhulukazi kumkakhe). Ngokuqondene nalokho akuthandayo, uDanilo ungumlingisi wokuzilibazisa ekhaya. Uthanda ukuphumula eduze kwamanzi nokudla kahle nomndeni. Isibonakaliso somdwebo wesandla esikhwameni sakhe ngezansi sikhombisa ukuthi uvela emlandweni womndeni wamaKatolika.
Ngokuqondene nalokho akuthandiyo, uDanilo akazizwa ekhululekile nabantu abangabazi. Akayithandi noma yikuphi ukugxekwa kwabazali bakhe nokudalula impilo yakhe emphakathini. Njengesikhathi sokubhala, okuncane akuyazi ngomfowabo, udadewabo, omalume (s) no-anti (i).
Njengesikhathi sokubhala lesi sihloko, uDanilo ongumuntu ocebile unenani elinganiselwa ku-$ 21 million. Naphezu kokuba uChafu abe yisibonelo sakhe, uDanilo wayeke wagcizelela lokhu okulandelayo ngamazwi akhe;
Ngingumuntu wami. Ngeke ngiziqhathanise nomuntu ngoba nginezimfanelo zami siqu.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda uDanilo da Silva Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.